HJRA Ampefiloha : tsy mbola azo vangiana Razaimamonjy Claudine | NewsMada
HJRA Ampefiloha : tsy mbola azo vangiana Razaimamonjy Claudine
Tsy mbola nalefa notsaboina any ivelany no tsy mbola niditra an’Antanimora. Mbola tazonina sy manaraka fitsaboana etsy amin’ny HJRA Ampefiloha, hatramin’ny fotoana nanoratana ny mpanolotsain’ny filoham-pirenena, Razaimamonjy Claudine, omaly. Na izany aza, araka ny loharanom-baovao, tsy mbola azo vangiana ny tenany. « Mahakivikivy ny toe-pahasalamany. Tsy mbola tena fantatra ny soritr’aretina mahazo azy fa mbola ao amin’ny fameloman’aina izy izao », hoy ny mpisolovava azy sady nifendrofendro, ny harivan’ny asabotsy teo, raha nanontaniana. Momba ny mety handefasana azy hotsaboina any ivelany kosa indray, nambarany fa tsy mbola fantatra izany. « Misy marary azo entina fiaramanidina. Misy kosa anefa ny tsy azo… Mety ho zakan’ny vatany sy ny toe-pahasalamany sy ny harefony ve izany ? Miankina amin’ny mpitsabo ihany izany », hoy ihany izy. Nambaran’ity mpisolovava ity fa mbola hivory izy ireo handinika ny momba izao raharaha izao.
Tsiahivina fa torana tsy nahatsiaro tena ity mpandraharaha akaiky ny filoha Rajaonarimampianina ity, ny harivan’ny zoma teo, tetsy amin’ny fampanoavana mijirika ny kolikoly (CPAC), 67 ha, rehefa nilatsaka ny didim-pitsarana ny amin’ny fidirany am-ponja vonjimaika eny Antanimora. Nalain’ny « ambulance » avy hatrany teny an-toerana ary nentina etsy amin’ny HJRA. Somary namoaka feo nitroatroana izany izy teny an-dalana nentina amin’ny « brancard » nihazo ny efitrano fitsaboana etsy Ampefiloha.
Fanodikondinam-bolam-panjakana sy famotsiam-bola…
Tsiahivina fa anisan’ny vesatra iampangana sy iahiahiana azy ny fanodinkodinam-bolam-panjakana sy fanamparam-pahefana ary koa famotsiam-bola. Misy dimy hafa koa anefa mpiray tendro aminy. Niakatra fitsarana niaraka taminy ny iray raha mbola tsy voasambotra kosa ny telo. Iray hafa manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly. Vola fanampiana ny kaominina 150 tapitrisa Ar ho an’ny taona 2014 sy 200 tapitrisa Ar ho an’ny taona 2015, ho an’ny kaominina Ialananindro, Fianarantsoa izao nahodinkodina izao. Niainga avy amin’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny minisiteran’ny Atitany avokoa izany.
Andrasana ny ho tohin’ny raharaha.